အံဆုံးညပ်ခြင်း | Page3| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
တတိယမြောက်နောက်ဆုံးအံသွားဟာ နေရာမရှိလို့ ပုံမှန်အတိုင်းမပေါက်နိုင်ဘဲ အံဖုံးထဲညပ်နေတာကို အံဆုံးညပ်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။
အံဆုံးဆိုတာ လူကြီးဘဝမှာ နောက်ဆုံးပေါက်တဲ့သွားပါ။ လူအတော်များများမှာ အံဆုံးအပေါ် ၂ ချောင်း၊ အောက် ၂ ချောင်း ရှိပါတယ်။
ဒီလိုအံဆုံးညပ်ခြင်းကြောင့် နာတာကျင်တာ၊ တခြားသွားတွေကို ပျက်စီးစေတာနဲ့ အခြားသွားနဲ့ခံတွင်းပြဿနာတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ တချို့တွေမှာတော့ အံသွားညပ်ခြင်းဟာ လတ်တလောမှာ ထူးထူးခြားခြား ဘာလက္ခဏာမှ ပြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ညပ်နေတဲ့သွားတွေကို သန့်ရှင်းဖို့ မလွယ်ကူတာမို့ ပုံမှန်သွားတွေထက်စာရင် သွားပိုးစားတာနဲ့ တခြားသွားဖုံးပြဿနာတွေ ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။
ဒီလိုပြဿနာပေးနေတဲ့ ညပ်နေတဲ့အံဆုံးသွားကို နှုတ်ပစ်လိုက်တာ များပါတယ်။ တချို့သွားဆရာဝန်တွေကတော့ ဘာပြဿနာမှ မပေးရင်တောင်မှ နောက်ပိုင်းပြဿနာမဖြစ်ရလေအောင် နှုတ်ပစ်သင့်တယ်လို့ အကြံပေးကြပါတယ်။
>> ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ -
အံဆုံးညပ်ခြင်းဟာ အမြဲတမ်းတော့လည်း လက္ခဏာမပြတတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အံဆုံးသွားပိုးဝင်တာ၊ တခြားသွားတွေကို ဒုက္ခပေးနေတာ၊ တခြားသွားပြဿနာပေးနေတာတွေ ရှိနေရင် ဒီလိုလက္ခဏာတွေ ပြတတ်ပါတယ်။
● သွားဖုံးတွေ နီရဲရောင်ရမ်းနေခြင်း
● သွားဖုံးတွေ နာကျင်နေခြင်း၊ သွေးထွက်နေခြင်း
● မေးရိုးတစ်လျှောက် ရောင်ရမ်းနေခြင်း
● ပါးစပ်ထဲမှာ မကောင်းတဲ့အရသာရနေခြင်း
● ပါးစပ်ဟရတာ ခက်ခဲခြင်း
>> ဘယ်အချိန်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ပြသရမလဲ?
အံဆုံးနားမှာ လက္ခဏာတစ်စုံတစ်ရာ ခံစားနေရပြီဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ပြသဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
>> ဘာကြောင့ ်ဒီလိုအံဆုံးညပ်ရသလဲ?
ပုံမှန်အတိုင်းထွက်လာဖို့ နေရာကောင်းကောင်း မရှိတာကြောင့် အံဆုံးညပ်ရတာပါ။
တတိယအံဆုံးသွားဟာ အသက် ၁၇ နှစ်နဲ့ ၂၅ နှစ်ကြားမှာ ပေါက်လေ့ရှိပါတယ်။ တချို့မှာ ဒီတတိယအံဆုံးသွားဟာ ဘာအခက်အခဲမှမရှိဘဲ ဒုတိယအံဆုံးသွားနောက်မှာ စီစီရီရီလေး ပေါက်လာတတ်ပေမယ့် များသောအားဖြင့်ကတော့ သွားတွေပြည့်နေပြီး အံဆုံးသွားပေါက်ဖို့ နေရာမရှိတာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တတိယအံဆုံးလေးဟာ အညပ်ခံဘဝ ရောက်တော့တာပေါ့။
ဒီလိုညပ်ရာမှာလည်း တစ်ပိုင်းတစ်စလေး တိုးထွက်လာပြီး တစ်ပိုင်းညပ်တာဖြစ်နိုင်သလို လုံးလုံးကြီးကို မထွက်လာဘဲ အပြည့်ညပ်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲညပ်ညပ် သွားဟာ -
● ရှေ့က ဒုတိယအံဆုံးသွားဘက်ကို တိုးထွက်လာတာ
● အာခေါင်အနောက်ဘက်ကို တိုးထွက်လာတာ
● တခြားသွားတွေလို အတည့်မထွက်ဘဲ ကန့်လန့်ထွက်လာတာ
● မေးရိုးထဲညပ်နေတာ စတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
>> နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကတော့ -
● တခြားသွားတွေကို ပျက်စီးစေခြင်း
အံဆုံးသွားကသာ ဒုတိယအံဆုံးကို တိုးထွက်လာရင် ဒုတိယအံဆုံး ပျက်စီးတာ၊ ပိုးဝင်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တခြားသွားတွေပါ ဖိအားများလာပြီး ခွဲစိတ်ဖို့လိုအပ်လာတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အံဆုံးသွားဟာ မေးရိုးထဲမှာ အိတ်ကလေးနဲ့ ဖြစ်တည်လာပါတယ်။ ဒီအိတ်ကလေးဟာ အရည်တွေနဲ့ ပြည့်လာပြီး မေးရိုးတွေ၊ သွားတွေ၊ အာရုံကြောတွေကို ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။ ရှားရှားပါးပါး တစ်ခါတလေ ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ ရိုးရိုးအကျိတ်ကလေး ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာရင် တစ်သျှူးတွေရော၊ အရိုးကိုပါ ဖြတ်ထုတ်ဖို့ လိုလာနိုင်ပါတယ်။
တစ်ပိုင်းတစ်စ တိုးထွက်နေတဲ့အံဆုံးသွားဟာ တခြားသွားတွေထက် သွားပိုးစားနိုင်ခြေ များပါတယ်။ သွားတိုက်ရတာ ခက်ခဲတဲ့အပြင် အစာတွေ၊ ဘက်တီးရီးယားတွေဟာ တိုးထွက်နေတဲ့ သွားနဲ့သွားဖုံးကြားမှာ ညပ်နေတတ်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို သွားတိုက်ဖို့မလွယ်တဲ့ တစ်ပိုင်းတစ်စ တိုးထွက်နေတဲ့ အံဆုံးကြောင့် သွားဖုံးတွေ ရောင်ရမ်းနာကျင်တဲ့အခြေအနေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အံဆုံးမညပ်အောင်တော့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မလုပ်နိုင်ပေမယ့် ၆ လတစ်ခါ သွားဆရာဝန်နဲ့ မှန်မှန်ပြသခြင်းဖြင့် အံဆုံးထွက်လာတာ၊ ကြီးထွားလာတာကို စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ မှန်မှန်ဓာတ်မှန်ရိုက်ပေးခြင်းဖြင့်လည်း ဘာလက္ခဏာတွေမှ မပြခင်ကတည်းက အံဆုံးညပ်နေတာကို တွေ့ရမှာပါ။
အသက်ရှူကြပ်တယ် မောတယ်ဆိုတာ ...
၂.၈.၂ဝ၂ဝ | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
မောတယ်ဆိုတာ တစ်ခါတလေမှာ ဘာမှမဖြစ်တတ်တတ်ပေမယ့် တစ်ခါတလေမှာ အရမ်းအရေးကြီးတာလည်း ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
>> ဘယ်အချိန်မှာ အရေးပေါ်ပြရမလဲ?
● မောတဲ့အပြင် ရင်ဘတ်ကပါ တင်းကြပ်ပြီး လေးလံနေတာ
● ရင်ဘတ်က နာတဲ့အပြင် နောက်ကျော၊ လည်ပင်း၊ လက်မောင်းတွေပါ နာကျင်နေတာ
● လူက နေလို့မကောင်းတာ...